Xogsoor News Network – Page 5 – Just another WordPress site
Madaxda dalalka Somaliya iyo Kenya oo kawada hadlay xiisadaha u dhaxeeya labada dal.
DAAWO: Xildhibaan Faarax C.qaadir oo weeraray farmaajo.
DAAWO:- Xildhibaan Jeesow Shacabka Somaliland ayay dan u tahay in farmaajo uu hargesa tago.
Wasiir Ka Tirsan Jubbalanad Oo Muqdisho Lagu Qabtay
Mooto Bajaajle lagu dilay Muqdisho
DAAWO: Gudoomiye Cirro oo ka hadlay Khudbadii Muse Bixi jeediyey iyo Mawqifkiisa Furitaanka Ururada siyaasadda.
DEGDEG:Ra’iisul Wasaaraha Sudan oo isku day dil ka badbaaday
Ra’iisul wasaaraha Sudan Abdalla Hamdok ayaa isaga oo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day lagu dili lahaa ayada oo qarax la adeegsanayo, sida uu sheegay kaaliyihiisa. “Qarax ayaa haleelay baabuurka ra’iisul wasaare Abdalla Hamdok, balse Allah mahadiis cidna wax kuma noqon,” ayuu yiri Ali Bakhit oo ah […]
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka qabtay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland Maxamed Xasan Maxamed. Wasiirka oo damacsanaa inuu u baxo dalka dibadiisa ayaa laga reebay diyaaradii uu la socday, waxaana kadib laga qaatay baasaboorka diblomaasiga iyadoo intaas kadib diyaarad kale […]
Farmaajo oo safar ku tegaya Baraawe iyo ujeedka safarkiisa oo
Madaxweynaha JFS, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada Baraawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka K/ Galbeed Soomaaliya. Qaban qaabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta madaxweynaha oo uu qeyb ka yahay madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa haatan laga dareemayaa magaaladaasi. Sidoo […]
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa Magacaabay Guddiga caleema saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Galmudug. Qoraal ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Qoorqoor ayaa lagu xusay magacyada 12 xubnood oo guddigan uu ka kooban yahay. HOOS KA AKHRISO MAGACYADA GUDDIGA
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan kula qaatay Villa Soomaaliya Wasiirka Arrimaha Gudaha Dalka Kenya Mudane Fred Matiang’i ayaa ka guddoomay dhambaal uu uga siday Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha ayaa la wadaagay wafdiga Dowladda Kenya ee soo gaaray dalka muhiimadda ay leedahay ka […]
Madaxda Maamulkii kooxda Ahlu Sunna oo gaaray dalka Imaaraadka Carabta.
Hogaamiyaha Ahlu suna Macalin Maxamuud Shiikh Xasan iyo madaxii hore ee xukuumada Galmudug Shiikh Maxamed Shaakir oo ay wehliyaan xubno kale ayaa maanta gaaray magaalada Dubai dalka Imaaraadka Carabta sida ay sheegayaan warar laga helay ilo lagu kalsoon yahay. Labada xubnood ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta […]
Maamulka Somaliland Oo Beeniyey In Uu Soo Gaadhay Cudurka Coronavirus. HALKAAN KA DAAWO MUUQAALK:
Dowlada dhexe oo sheegtay in duqeyn lagu diley Bashiir Qoorgaab oo ka tirsan Al-Shabaab
Dowlada Federalka ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah lagu diley 22kii bishii hore sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Alshabaab. Sida lagu daabacay Bogga Wakaalada Wararka Sonna duqeyntan ay fuliyeen ciidamada Maraykanka oo ka dhacday degmada Saakow ayaa lagu diley Bashiir Maxamed Duduble (Qoorgaab). Wakaalada ayaa daabacday in Bashiir uu […]
Cabdi wali gaas oo laga baarayo cudurka corona virus, markuu kasoo degay garoonka dayuuradaha magaalada Garoowe. Cabdi wali oo kasoo galay dibadda dalka ayaa la istaajiyay markuu kasoo degtay diyaaradda. Sawirkan wuxuu ku faafay baraha bulshada, dadka soomaaliyeed waxay isu barbardhigeen wasiiradda soprtiga Khadiija Diiriye marka ay kasoo degatay garoonka […]